China Model No: CBJ Series haịdrọlik scrap bale emebi ngwaọrụ factory na suppliers | Jikọọ Top
Model No: CBJ Series haịdrọlik scrap bale emebi igwe
Ọrụ: Nke a CBJ Series haịdrọlik scrap bale emebi ngwaọrụ a na-pụrụ iche maka imebi Bales nke na-extruded si n'efu ụgbọala ma ọ bụ ihichapụ ígwè.
Chọrọ maka scrap bale ngọngọ: size of scrap bale ≤2000mm×800mm×800mm (L × W × H), njupụta ≤2.5 tọn / m³.
CBJ usoro hydraulic scrap bale breaker igwe adabara maka ụlọ ọrụ mgbake ọla, ihe nchara osisi, na-agbaze na ụlọ ọrụ mgbatị iji melite ogo nke ihe nchara na nchara iji nye nnukwu ọrụ nrụpụta nke ngwa ọrụ ọkachamara,
CBJ usoro haịdrọlik scrap bale emebi ngwaọrụ a makwaara dị ka pịa ngọngọ decomposition igwe, bụ ọgbọ ọhụrụ nke ọkachamara dismantling nke scrap metal bales, a ụdị ule akụrụngwa. CBJ usoro hydraulic scrap bale breaker igwe nwere ike ịchọpụta adịghị ọcha na ngwugwu ngwugwu onye ọrụ, iji hụ na ọdịnaya nke nchara nchara, iji hụ na ngwaahịa ngwaahịa nchara, iji kwado nkwụsi ike nke ahịa nchara, CBJ usoro hydraulic scrap bale breaker igwe a na-ejikarị ya eme ihe na ígwè, gbazee, nchara, wharf na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
●CBJ usoro hydraulic scrap bale breaker igwe nwere nkọwa na ụdị dị iche iche, nke nwere ike izute mkpa nke ndị ahịa dị iche iche.
Of Enwere ike ịgbakwunye igwe dị iche iche dị ka ihe ndị ahịa chọrọ
CBJ usoro hydraulic scrap bale breaker igwe achọghị ka edozi ya ma wụnye ya
Operation Mfe PLC na-arụ ọrụ, nkwụsi ike siri ike, ihe nchekwa dị elu, nkewa kpamkpam.
CBJ usoro hydraulic scrap bale breaker igwe nwere Low mkpọtụ, enweghị mkpọtụ.
● Ngozi nke akụrụngwa, nrụpụta dị elu
N'oge ị na-arụ ọrụ CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine, arụkwala ya, emetụkwala akụkụ ahụ na-agagharị aka, etinyela aka na igbe ihe eji aka gị ma ọ bụ ụkwụ gị
CBJ usoro hydraulic scrap bale breaker igwe na-enye mmanụ na mmanụ agbakwunyere mmanụ site na mgbapụta hydraulic plunger, wee nyefee ya na cylinder haịdrọlik site na valvụ a na-ekesa na-ekesa iji mepụta ike. Enwere ike idozi nrụgide ahụ na akara achọrọ dịka ọnọdụ ahụ si dị (akara ngosi gosipụtara site na nlele nrụgide) .A na-ekewapụ onye na-egwu mmiri site na ịghọta na ịpịpụta hydraulic manipulator, na ịtọghasị bales site na ọtụtụ ire ere.
CBJ usoro haịdrọlik scrap bale emebi igwe mejupụtara isi engine, haịdrọlik usoro, manipulator, urukurubụba doo, mmanụ tank, mmanụ mgbapụta na moto.
2.Replaceable mboanuohia n'isi agụba
Replaceable elu - ike alloy ígwè agụba na-eji na isi nke mboanuohia, melite na-eyi ndị na-eguzogide na ọrụ ndụ nke nko mboanuohia.
1. 1.Mfe iwepụta
CBJ usoro haịdrọlik scrap bale breaker igwe nakweere a ọzọ na nkà mmụta sayensị nko na mboanuohia usoro, na nko mboanuohia bee n'ime ngwugwu mma, na-eme ka ọ dịkwuo mfe itopusi.
3. Eyi ihe eji eme ihe eji edozi uzo
Dabere na njirimara ejiji nke okporo ụzọ ntuziaka na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa nke etiti ahụ, arụnyere akwa dị elu na-eguzogide alloy nchara.
.Dị Elu ọnụ nsogbu (Ton) Mbughari bale size（mm） Ike (KW)
CBJ-1200 120 ≤ 600 x 600 Ogbe 18.5
Anyị CBJ Series haịdrọlik scrap bale breaker igwe na-enye omenala ama ika igwe akụkụ, anyị na e na-ekwenyere ọtụtụ ụwa na-ama ika soplaya, dị ka SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI na na na ihe karịrị 10 afọ
Obere ihe nlereanya Anyị CBJ Series hydraulic scrap bale breaker igwe nwere ike chebe nke ọma na otu 40 HQ akpa. Ọ bụrụ na ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri, anyị ga-ekpuchi poncho na Load oche iji kpuchido CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine.
Lelee CBJ usoro Hydraulic Scrap Bale Mgbaji igwe na Omume!
Nke gara aga: Model No: Chinese rụpụta Automatic Control WS Series Hydraulic Scrap Metal Container Shear Machine
Osote: Model No: Chinese rụpụta Automatic Control SPJ Series metal shredder igwe
haịdrọlik scrap bale emebi igwe
Metal Powder Briquette Machine, Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Agụba Shear Maka Mobile Digger, Ọla kọpa Scrap Baler, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine,